Guddoomiye Saleebaan Oo Iscasilaya | Baligubadlemedia.com
Guddoomiye Saleebaan Oo Iscasilaya
Dareen Muwaadin: Xogaha cusub!
Waxa Qoray Suxufi Cabdillaahi M Cali
Ku darso shaxda cusub ee in ay qayb ka noqoto khilaafka siyaasadeed ee JSL arinka Guurtida ee aan wali soo shaacbixin..
Sow maad maqlin in Golaha Guurtidu ay “Gudi” u saartay si ay u soo daristo mudo kordhin loo sameeyo Golaha Wakiilada mar kale?
Haddaba maxaa daba socda mudo kordhintaa Golaha Wakiilada?
Sid ay sheegayaan xogaha aan helayaa, Gudoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan, waxa uu madaxweynaha JSL ku wargaliyey in uu “Iska nasanayo” sidaa darteed uu banaynayo xilka Gudoomiyenimo.
“Nasashada” Gudoomiye Saleebaan waxa ay abuuraysaa fursad cusub oo xileed oo lagu loolamo, iyadoo loolanku sida xeerka Guurtidu sheegayo qofka dhinta ama ka taga xil Guurti waxa badalkiisa leh ‘reerka’ xubintaasi ka soo jeedo, laakiin gudoomiyenimada waxa leh Golaha oo soo dooranaya, waana halka ay ka imanayso fursada la wada lee yahay.
Inkastoo aynu hore u aragnay iyadoo aan gulu dhexdooda iska xulin markii uu geeriyooday marxuun Sheekh Ibraahim, Gudoomiye Saleebaan oo siyaasi ahna dusha lagaga keenay iyadoo madaxweyne Daahir Riyaale dano siyaasadeed oo dajin ah ka lahaa.
Hase ahaatee xilka uu banaynayo Gudoomiye Saleebaan waxa la sheegay in durba la calaamadiyey xubin aan Golaha ku jirin, balse ka mid ah xubnaha uu madaxweyne Muuse aadka ugu kalsoon yahay, waana xubin caan ah.
Haddaba su’aashu waxa ay tahay yaa ku haboon ee mudan in lugu badalo Gudoomiye Saleebaan Nuur, xilka Gudoomiyenimo ee uu banaynayo?